Apple Cook waxay ku darsan doontaa hadhuudhkeeda si ay Shiinaha uga dhigto mid casri ah | Waxaan ka socdaa mac
Shir sanadle ah oo ay abaabusho oo ay hogaamiso Xarunta Cilmibaarista Horumarinta Golayaasha Gobolka ayaa la qabtaa sanad kasta si la isugu keeno madaxda adduunka ugu caansan iyo agaasimayaasha guud si looga hadlo mustaqbalka dhaqaalaha Shiinaha. Khariidadda dhaqaalaha adduunka ayaa sidoo kale laga wada hadlay. Gudoomiyaha BMW ee Gudiga Maamulka Oliver Zipse coprot ayaa shir gudoomin doona shirka sanadkan. Tim Cook wuxuu joogi doonaa shirka waxayna gacan ka geysan doontaa casriyeynta cusub ee waddanka Aasiya.
Maamulaha Apple Tim Cook wuxuu ka mid noqon doonaa in ka badan 100 agaasimayaal sare iyo maamuleyaal ka qeyb galaya Madasha Horumarinta Shiinaha ee sannadkan laga bilaabo Sabtida, Maarso 20 illaa Isniinta, Maarso 22, sida ku cad macluumaadka ay soo saartay GlobalTimes. Madasha sanadkan ayaa lagu calaamadeyn doonaa "qorshihii ugu horreeyay ee shanta sano ee Shiinaha uu ku bilaabayo safar cusub oo uu si buuxda ugu dhisayo waddan casri ah oo hantiwadaag ah isla markaana lagu gaarayo himilada labaatan jirsatay." Dulucda guud ee shirku waa "Shiinaha safar cusub oo dhanka casriyeynta ah".
Shirka sannadkan wuxuu noqon doonaa mid isku dhaf ah oo muuqaal iyo fool-ka-fool ah. Weli garan mayno in Cook qof ahaan uga soo qayb geli doono iyo in kale shirka ama wuxuu ka sameyn doonaa xarunta Apple ee Cupertino khadka tooska ah. Ma noqon doonto markii ugu horreysay ee uu Tim Cook ka qayb galo shirka aan kor ku soo sheegnay. 2018, Cook wuxuu si wada jir ah u guddoomiyay shirka, kaas oo uu u dooday in la adkeeyo qawaaniinta asturnaanta. Waxaas oo dhami waxay yimaaddeen iyadoo muran ka taagnaa Facebook iyo falanqaynta Cambridge.
Sannadkan waxaa hubaal ah inuu ka dhex muuqdo dhammaan ka soo qaybgalayaasha, dib u dhaca siyaasadeed iyo hoos u dhaca ee waddanka Aasiya ku soo maray Mareykanka. Donald Trump wax ugama fududeynin helitaanka waddankaas casriga ah. Si kastaba ha noqotee hadda waxaan ku jirnaa xilli cusub iyo Tim Cook wuu ogyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple Cook waxay ku darsan doontaa hadhuudhkeeda si ay Shiinaha uga dhigto mid casri ah
Ku dhawaaqida cusub ee AirPods Pro ka hor bilaabista AirPods 3